Notoloran’i Sarajevo mariboninahitra maha-olompirenena i Bruce Dickinson · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2018 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Ελληνικά, Français, Español, Português, English
Pikantsary avy amin'ny fanadihadiana “Manaova hiaka ho ahy, Sarajevo” miaraka amin'ny lahatsary ôrizinaly tamin'ny fampisehoana tamin'ny 14 Desambra 1994 nahitana an'i Chris Dale sy Bruce Dickinson.
Latsabato tsy nisy nitsipaka no nanapahan-kevitra hanoloran’ ny Fikankevitra Monisipaly ao Sarajevo ny “mahaolom-pirenena Sarajevo ho fanomezam-boninahitra” ho an'ilay mpanakanto Britanika Bruce Dickinson, .
Fivorian'ny Filankevitra Monisipaly tao Sarajevo tamin'ny 31 Oktobra 2018. Sary avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Filankevitra Monisipaly ao Sarajevo.
Nomena ho fahatsiarovana ny fitsidihan'i Dickinson tao anatin'ny Fahirano tao Sarajevo, nandritra ny nampamaivay ny Ady Bosniaka ity fanomezam-boninahitra ity. Nahitana ny fampisehoana tamin'ny 14 Desambra 1994 izany.
Araka ny fanambarana an-gazety nataon'ny Filankevitra Monisipaly dia ny ONG sy ny fikambanan'ireo mpanakanto Concept Media no nipoiran'ity hetsika ity.
Fanta-daza amin'ny maha-mpihira malaza azy ao amin'ny tarika rock mavesatra Iron Maiden i Dickinson, izay nanana (sy mbola manana) mpankafy maro be manerana an'i Yogoslavia teo aloha sy any Eoropa Atsinanana.
Ny tantaran ‘ny fampisehoana nataon'i Dickinson no foto-kevitry ny horonantsary fanadihadiana tamin'ny taona 2016 “Manaova hiaka ho ahy, Sarajevo,” izay aingam-panahy nalaina avy amin'ny bilaogin-dahatsoratra taona 2010 MetalTalk avy amin'i Chris Dale mpikambana ao amin'ny tarika .
Notontosain'ny vondrona mpanoratra Bosniaka ny horonantsary, anisan'izany ilay mpamokatra sarimihetsika Adnan Ćuhara. Tao anatiin'ny antsafa, nitantara indray ny fomba nanovan'ny zavatra niainany tao amin'ilay tanàndehibe natao fahirano taona maro taorian'ny fitsidihany i Dickinson:
I was quite naive about it. They wouldn't be asking us to go into a proper war […] and it was more than just a proper war. It was a PROPER war. It was harrowing and it changed the way I thought about people.
Tsy nahalala loatra ny momba izany aho. Tsy nangataka anay hiditra amin'ny tena ady ry zareo […] ary mihoatra noho ny tena ady fotsiny izany. Ady ARAKA NY TOKONY HO IZY. Tena mafy izany ary nanova ny fomba fijeriko ny olona .
Tao anatin'ny fanambarana vao haingana tao amin'ny gazety ao Sarajevo Dnevni avaz, nilaza i Ćuhara fa naneho fankasitrahana ny rehetra, indrindra fa ny olom-pirenen'i Sarajevo i Bruce Dickinson. Niaraka tamin'ny fomba fihetsiny manetry tena, nanamarika ity mpihira ity fa nizara ilay loka fanomezam-boninahitra niaraka tamin'ny tarika izy izay niaraka taminy nandritra ilay dia mankahatra loza, sy ry zareo avy amin'ny Firenena Mikambana izay nanohana ilay lanonana.
Bruce Dickinson o tituli Počasni građanin Sarajeva: Emocije se miješaju, hvala svima https://t.co/o3x2vdVtpj
— Edita Gorinjac (@EditaGorinjac) October 31, 2018
Bruce Dickinson about the title Honorary citizen of Sarajevo: My emotions are swirling, thank you all.
Bruce Dickinson momba ny Mahaolompirenena am-boninahitra Sarajevo: Mientanentana ny fihetseham-poko, misaotra anareo rehetra.
Tsy nanamafy i Dickinson raha ho afaka hankany Sarajevo izy amin'ny 25 Novambra mba handray ny loka manokana.
@alex_hefner You gotta watch “Scream For Me Sarajevo” and read Bruce Dickinson's autobiography. You'll gain a whole new appreciation for the God of Metal
— Tim Brown (@Brimtown) October 26, 2018
Tokony hijery ny “Manaova hiaka ho ahy Sarajevo” ianao sy hamaky ny tantara momba an'i Bruce Dickinson izay nosoratany. Hahazo fankasitrahana vaovao tanteraka ho an'ny Andriamanitry ny Mozika Metaly ianao
Olona miisa 13.952 no maty nandritra ny fahirano tao Sarajevo, anisan'izany ny sivily miisa 5.434. Naharitra efa ho 3 taona sy 11 volana izany ary noheverina ho ilay fahirano lava indrindra tao an-drenivohitra nandritra ny ady maoderina.
Tamin'izany fotoana izany, tena nanan-danja tokoa ho an'ireo olom-pirenana natao fahirano izay niaina tao anatin'ny fitokona-monina sy tomerin'ny fitaovam-piadiana mafonja sy ny tifitra avy any ankavoana manodidina teo ny fifandraisana tamin'ireo mpanakanto vahiny. Nandritra ny taona maro, naneho ny fankasitrahany ho an'ireo mpanakanto izay nankahery azy ireo tamin'ny endrika fanohanana maro samihafa izy ireo, anisan'izany ny fanomezam-boninahitra ilay kintan'ny mozika Britanika David Bowie .